Imwe itsva Yekufamba Sarudzo: Kuyambuka muganho uchisunda njanji yetrolley
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Imwe itsva Yekufamba Sarudzo: Kuyambuka muganho uchisunda njanji yetrolley
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Nhau Dzakanaka • North Korea Kuputsa Nhau • Rail Kufamba • Russia Kuputsa Nhau • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Hapana gasi, hapana magetsi kana chiutsi chinodiwa. Iyi fomu yekufambisa ndeyenharaunda ine hushamwari uye vanopfuura vanova injini.
Kufamba kwenyika dzese zvino kunosanganisira kusunda njanji yetiraki munzira dzakasiiwa kuti ubve munyika.
Nyika iri North Korea, iri kuenda Russia.
Zvakatora vamiriri vasere veRussia maawa masere kuti vasundidzire tirori yavo izere nemikwende uye vana vako kumusha kuna Amai Russia.
Hurumende yeNorth Korea yakanga yavhara miganhu yayo nekuda kweCOVID-19 uye nendege dzenyika dzese, kusanganisira paAir Koryo pakati peVladivostok nePyongyang yakamiswa imwe nguva yapfuura.
Pawebhusaiti yavo, Embassy yeRussia yakarumbidza hukama hwayo hwakanaka neDemocratic Peoples Republic of Korea, inozivikanwa seNorth Korea mukutaura kuti:
Iyo DPRK yakanaka yakanaka-yakamira mira shamwari yedu. Tsika dzinokudzwa dzehukama pamwe nekubatana dzakasimbiswa mukati memakore ehondo dzakapa hwaro hwakavimbika hwokusimbisa nekuvandudza hukama pakati peMoscow nePyongyang. Zviri mukuda kwedu kwakanyanya kuona kuti peninsula yeKorea inoganhurana neFar East yedu inonyatsoratidza huvakidzani hwakanaka pamwe nekudyidzana kunobatsira.
Sekureva kweshumo pamusoro peCNN, Embassy yeRussia yakati papeji rayo rakavimbiswa reFacebook. kuti rwendo rwakatanga nechitima.
VaRussia vakapedza maawa makumi matatu nemaviri vachifamba munzira yechinyakare yeNorth Korea, isina kuchengetedzwa uye ine mbiri inononoka njanji. Vakabva vakwira bhazi kwemaawa maviri kuenda kumuganhu, uko mhuri dzaida kuhodha trori yetiraki yemikwende yavo nekuisundidzira iyo imwe nzira.
Trolley, inozivikanwawo setiroko, rudzi rwemotokari yezvitima yakakurumbira muma1800s iyo inofambiswa nevatakuri vayo kuburikidza nekushandisa pombi yekuita lever, kana nevanhu vanosundira mota kumashure.
Sekureva kweCNN, Embassy yakatumira mifananidzo miviri yemunyori wechitatu Vladislav Sorokin vachisunda mhuri yavo nemikwende yavo munzira dzezvitima vakapfeka mbatya dzakakora dzechando. Mudiki pane vashandi aive mwanasikana waSorokin ane makore matatu Varya. Sorokin aifanira kusunda chingoro chemakiromita (3 mamaira), chikamu chayo chaisanganisira zambuko pamusoro peRwizi Tumen runoparadzanisa Russia neNorth Korea.
Imwe mhuri ichingosvika pachiteshi cheRussia che Khasan, vakasangana nevamwe vaishanda navo mu Ministry of Foreign Affairs vakavabatsira kuenda kunhandare yendege kuVladivostok.
Ndege pakati peVladivostok neMoscow dziri kushanda.